Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air Belgium waxay heshay diyaaraddeedii ugu horreysay ee Airbus A330neo
Airlines • Airport • Aviation • Belgium War Deg Deg Ah • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Air Belgium waxay heshay diyaaraddeedii ugu horreysay A330neo
Qoyska A330neo waa jiilka cusub ee A330; waxay ku dhisan tahay dhaqaalaha la xaqiijiyay, wax -is -weydaarsiga iyo isku -halaynta Qoyska A330, iyadoo hoos loo dhigayo isticmaalka shidaalka iyo qiiqa CO2 qiyaastii boqolkiiba 25.
Air Belgium ayaa diyaaradda ku dejin doonta waddooyinka isku xira Brussels iyo meelaha fog-fog.
Diyaaraddu waxay ku habboon tahay 286 kursi oo ku jira qaab-dhismeed saddex-dabaq ah-30 fasal ganacsi oo jiif ah oo raaxo leh, 21 heer-sare ah, iyo 235 kursi oo heer-dhaqaale ah.
Dhammaan kuraasta waxaa lagu qalabeeyay jiilkii ugu dambeeyay, nidaamka madadaalada ee duulimaadka, Wi-Fi dusha saaran iyo iftiinka niyadda.
Air Belgium, oo ah adeeg-bixiye caalami ah oo si buuxda u socda oo xaruntiisu tahay Mont-Saint-Guibert ee Belgium, ayaa qaadatay qeybtii koowaad ee laba A330-900.
Diyaaraddu waxay ku habboon tahay 286 kursi oo ah qaab saddex-heer ah (30 fasal ganacsi oo been-abuur ah oo raaxo leh, 21 heer-sare ah, iyo 235 kursi oo heerka dhaqaalaha ah). Diyaaradda waxaa lagu qalabeeyay Airbus Qolka hawada. Dhammaan kuraasta waxaa lagu qalabeeyay jiilkii ugu dambeeyay, nidaamka madadaalada ee duulimaadka, Wi-Fi dusha saaran iyo iftiinka niyadda.
Waad ku mahadsan tahay A330neo teknolojiyaddii ugu dambeysay, Air Belgium waxay ka faa'iideysan doontaa xalalka diyaaradeed ee wax-ku-oolka ah oo wax-ku-oolka ah, iyada oo la siinayo rakaabka heerarka raaxada ugu fiican ee aqallada ugu xasilloon fasalkeeda. Intaa waxaa dheer, buuqa hoose iyo qiiqa marka la barbar dhigo diyaaradihii jiilkii hore ayaa ka dhigaya A330neo deris madaarka saaxiibtinimo leh.
Air Belgium waxay diyaaraddan geyn doontaa waddooyinka isku xira Brussels iyo meelaha fog-fog.
Xamuulka reer Belgium wuxuu hadda ku shaqeeyaaAirbus diyaarad ballaadhan oo ka kooban A330-200F iyo A340-300; A340s ayaa si tartiib tartiib ah loogu beddeli doonaa A330neos.
Qoyska A330neo waa jiilka cusub ee A330; waxay ku dhisan tahay dhaqaalaha la xaqiijiyay, wax -is -weydaarsiga iyo isku -halaynta Qoyska A330, iyadoo la yareynayo isticmaalka shidaalka iyo CO 2 qiiqa ku-dhawaad ​​25 boqolkiiba halkii-kursi marka la barbar dhigo jiilkii hore, diyaaradihii tartamayay, waxayna bixisaa awood baaxad leh oo aan la barbardhigi karin. A330neo waxaa ku shaqeeya Rolls-Royce's jiilkii ugu dambeeyay ee Trent 7000 matoor wuxuuna muujiyaa baal cusub oo leh baalal korodhay iyo baalal isku jira si ka fiican, aerodynamics shidaal garaacaya.
Iyada oo leh buug amar ah oo ka badan 1,800 oo diyaaradood oo ka yimid 126 macmiil dhammaadkii Sebtember 2021, A330 ayaa weli ah diyaaradda qoyska ugu ballaadhan ee ugu caansan abid.